सफलताको कथा: कामदारदेखि मालिकसम्म - Naya Online
बिहिबार, चैत्र ६, २०७६ (March 19th, 2020 at 3:17pm ) अन्तर्वार्ता, प्रवास, बिजनेस, ब्रेकिंग न्युज
बैदेशिक रोजगारीको एक गन्तव्यस्थल हो– मलेसिया । हरेकवर्ष लाखौं नेपालीहरु मलेसिया पुग्ने गर्छन् । मलेसियामा कोहि कम्पनीमा, कोहि सुरक्षा गार्डमा, कोहि होटल लाईनमा काम गर्छन् भने कतिले आफ्नै व्यावसाय चलाएर बसेका छन् । नेपाल, भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स् लगायत थुप्रै देशबाट रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने भएको हुँदा त्यहाँको व्यावसाय पनि फस्टाएकै छ । त्यस्तै एक नेपाली व्यावसायी हुन्– राजेन्द्र खापुङ ।
खापुङ सन् २००३ मा मलेसिया पुगेका हुन् । सुरुमा त खापुङ थाइल्यान्ड हुँदै मलेसिया पुगेका थिए । करिब १५ वर्ष त कोरियन रेस्टुरेन्टमा काम गरेको अनुभव सुनाउँछन् उनि । त्यो १५ वर्षमा अनगिन्ती समस्या र दुःखहरुसँग जुध्नुपर्‍यो । भाडा माझ्ने कामदारदेखि हेड कुकसम्म बने । १५ वर्षको लामो मलेसियाको बसाई पछि भने आफ्नै व्यावसाय सुरु गरेका हुन् ।
अहिले मलेसियाको जोहोरमा उनको आफ्नै रेस्टुरेन्ट छ । जसलाई “सुर्केली किचन”नाम दिएका छन् । विहानदेखि बेलुकासम्म खापुङ त्यहि रेस्टुरेन्टमा व्यस्त रहन्छन् । नेपाली र इन्डोनेसियन गरी जम्मा ५ जना कामदारहरु छन् । कति त परिवार सहित छन् । उनिहरुलाई खान बस्न फ्रि गरेर मासिक १३०० देखि १८०० सय रिंगेट सम्मको तलब दिएका छन् । दशकौंदेखि मलेसियामै हराइरहेका नेपालीहरु पनि ‘सुर्केली किचन’मा भेटिन्छन् । एउटा सिंगो घरलाई होस्टलको रुप दिएका छन्, जहाँ होस्टलम नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारहरु बस्ने गर्छन् ।
खापुङ मिहिनेतलाई मान्नैपर्छ । विहान सबैरै उठेर आफै किनमेल गर्न निस्कन्छन् । किनमेल गरेर रेस्टुरेन्ट आइपुग्दा कामदारहरु पनि उठिसकेका हुन्छन् । साहुको गाडी आयो भन्ने थाहा पाउने वित्तिकै उनिहरु बाहिर निस्किन्छन् । गाडीबाट सामान निकालेर विहानको खाना, नास्ता बनाउन सुरु गर्छन् । खापुङ आफु भने घरमा भएका कुकुरहरुसँग खेल्न सुरु गर्छन् । माउबच्चा गरी जम्मा ९ ओटा कुकुरहरु थिए । उनिहरुको लागि मात्रै दैनिक करिब ५÷६ केजि मासु किनेर ल्याउनुपर्छ । कुकुरका बच्चाहरुलाई सबै नेपाली नाम राखिदिएका छन् । उनिहरुले आफ्नो नाम थाहा पाउँछन् ।
खाना तयार भइसकेपछि गाडिमा खाना लगाएर ठाउँठाउँमा खाना पुर्‍याउन खापुङ आफै निस्किन्छन् । समयभन्दा १ मिनेट अघिपछि नगरी ठीक समयमा खान पुर्‍याउछन् । विहान लगभग २०० र बेलुका २०० जनालाई खाना बाहिर डेलिभर गर्नुपर्छ । होटलमा खान आउने पनि लगभग १०० जना जति हुन्छन् ।
खापुङका अनुसार रेस्टुरेन्ट राम्ररीनै चलिरहेको छ । कमाइ राम्रै छ । यतिको रेस्टुरेन्ट नेपालमा चल्दैन होला ? मैले प्रश्न राखेको थिएँ । नेपालमा चल्न त चल्छ तर मलेसिया र नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउनुमा केहि फरक छ ।
२०३६ सालमा आमा नारान कुमारी सम्वाहाम्फे र बुबा कैलाश खापुङबाट जेठा छोराको रुपमा तेह्रथुमको ओयाक्जुङ–१ सुर्केमा जन्मिएका हुन्–राजेन्द्र खापुङ । स्थानिय श्री सरस्वती प्राविबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिई शंकर मावि जलजलेबाट निम्नमाध्यमिक र प्रकाश मावि प्रकाशपुर सुनसरीबाट एसएलसी गरेका खापुङले उच्च शिक्षा अध्ययनरत छँदाछँदै वैदेशिक रोजगारीका बाटो समातेका थिए ।
गोरो छाला, सेताम्मे फुलेका कपाल, प्रायः मलेसियन नागरिकहरुले उनलाई चाइनिज भन्ठान्छन् । बुझेअनुसार मलेसियामा चाइनिजहरुलाई अलि विश्वास गरिदो रहेछ । ‘कतिपय नेपालीहरु खाएर भाग्छन्, एउटालाई खोजेर पिटेँ । तुरुन्तै प्रहरी आयो । मलेसियन भाषामा प्रहरीलाई पिट्नुको कारण बताएँ, प्रहरीले बुढो मान्छेलाई दुःख दिने भन्दै उल्टै उसैलाई गाली गर्‍यो । मलाई चाइनिज बुढा मान्छे भन्ने सोचेछ धेरै सोधपुछ पनि नगरी छोडिदियो’– काम गर्दाका अफ्ठ्याराहरु सुनाउछन् उनि ।
राजेन्द्रका बुबा वैदेशिक रोजगरीकै लागि साउदीमा पुगेका थिए । दुर्भाग्यबस २०४९ सालमा मेसिनमा दुर्घटना भइ मृत्यु भएको खबर घरमा आयो । त्यत्तिबेला उनी मात्रै १४ वर्षका थिए भने २ जना बहिनी र १ जना भाइ साना–साना थिए । जेठा छोरा भएका हिसाबले स्वभावैले घरको जिम्मेवारी उठाउन आमालाई सघाउनुपर्ने बाध्यता उनमा आइपरेकै हो । तिनै बाध्यताले ठेल्यो उनलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ ।
गरे के हुन्न रहेछ र ? चन्द्रमामा पाइला राखेर पृथ्विमा फर्किनुमात्रै सफलता हैन । खापुङ आफ्नै मिहिनेतले यहाँसम्म आइपुगेका छन् । दु:खसुखसँग जुधेका उनका लागि यो निकै ठूलो सफलता हो । मिहिनेत गरे अवश्य सफल भइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण बनेका छन् ।